Gịnị bụ Akaụntụ Dabere na Ahịa? | Martech Zone
Gịnị bụ Akaụntụ Dabere na Ahịa?
Tọzdee, Disemba 10, 2015 Tuesday, August 1, 2017 Doug Bewsher
Azụ ahịa dabere na akaụntụ (Acronym: ABM) na-aghọ ngwa ngwa ga-enwe maka ụlọ ọrụ B2B. Dabere na nyocha ya nke ndị na-ere ahịa B2B, ITSMA kwubiri:
ABM na-anapụta mbughachi kachasị elu na itinye ego nke atụmatụ ahịa B2B ọ bụla ma ọ bụ aghụghọ. Oge.
SiriusDecision si Ọchịchị 2015 nke Basedlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Akaụntụ (ABM) achọpụta na 92% nke ndị na-ere ahịa B2B kwuru na ABM bụ oké or dị nnọọ dị mkpa maka mbọ ahịa ha dum.
Dabere na Megan Heuer, Onye isi oche na onye isi otu na SiriusDecisions:
Ihe na-eme ABM mara mma ugbu a bụ ụzọ ọ na-agwakọta nghọta maka atụmatụ na teknụzụ maka igbu. Otu ndi ahia nke ghotara ABM no n’onodu di ike ka ha kwekorita n’ihe ahia choro, na ime ezi uche banyere ihe kwesiri ime na oge kwesiri iji ha bulie akuko di elu.
Ahịa a na-ere ahịa nwere ike iburu ụwa B2B na nsogbu, mana gịnị ka ọ gụnyere n'ezie na gịnị kpatara mkpali niile? Ka anyị lebakwuo anya.
Wikipedia na-akpọ ABM usoro nhazi maka ahịa ahịa nke nzukọ na-atụle ma na-ekwurịta okwu na atụmanya onye ọ bụla ma ọ bụ akaụntụ ndị ahịa dị ka ahịa nke otu. Jon Miller nke Aglọ ọrụ kwuru ABM ichikota ahia nke onwe na ire ahia iji meghee onu ma nwekwuo mmekorita na akuko.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụzọ iji kọwaa ABM, ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na ihe ole na ole. ABM mkpọsa:
Gbado anya na isi mkpebi mkpebi niile n'ime ụlọ ọrụ (akaụntụ), ọ bụghị naanị otu onye na-eme mkpebi (ma ọ bụ onye),
Lee anya na akaụntụ ọ bụla dị ka "ahịa nke otu," yana ozi na atụmatụ bara uru ahaziri maka mkpa nke ụlọ ọrụ ọ bụla n'ozuzu ya,
Jiri omenala ọdịnaya na izi ozi Ebumnuche iji dozie nsogbu na ohere ụfọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Tụlee ọ bụghị naanị ire otu oge mana oge ndụ nke onye ahịa ọ bụla mgbe ị na-esetịpụ ihe ndị ka mkpa,
uru mma n'elu ọtụtụ mgbe ọ na-eduga.
Usoro eji amara, Ebumnuche Dị Irè
Ozi ọma maka onye ọ bụla na-ere ahịa na-achọ ịnwale ụzọ ABM bụ na ngwá ọrụ na usoro abụghị ihe ọhụrụ na nke ọhụrụ; ha dabere na usoro ndị ahịa B2B gosipụtara gosipụtara kemgbe ọtụtụ afọ:
Nchọpụta dị n'èzí jiri email, ekwentị, mgbasa ozi mmekọrịta na ozi nzi ozi
Nbanye ahịa site na ntinye ihe ndi ozo, ntaneti, webinars na ntinye aka na mgbasa ozi
Usoro Digital dị ka mgbasa ozi dabeere na IP na nlọghachite, mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ịhazi weebụ na ịkwụ ụgwọ ndu gen
Ihe, ihe ngosi ahia, ihe omuma na ihe ndi ozo
Nnukwu ihe dị iche bụ n'ụzọ e si ezube ngwa ọrụ na ụzọ ndị a. Dị ka Miller kwuru:
Ọ bụghị banyere onye ọ bụla tactic; ọ bụ ngwakọta nke imetụ aka na-eme ka ịga nke ọma.
Ftgbanwe Ndozi site na Persona na Akaụntụ
Omenala ahia B2B na-adabere na ichoputa udiri onye na-eme mkpebi (ma obu mmadu) na imeputa uzo ahia iji dọta uche ha. ABM na-eme mgbanwe site na ịchọta mmadụ izugbe iji chọpụta otu dị iche iche nke ndị nwere mmetụta ụfọdụ. Dabere na nyocha nke 2014 IDG, nzụta azụmaahịa na-emetụta mmadụ 17 (site na 10 na 2011). ABzọ ABM na-achọpụta na mgbe ị na-ere otu ngwaahịa ma ọ bụ ihe ngwọta maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịnweta ozi gị n'ihu ọtụtụ ndị mmadụ n'ọkwa dị iche iche nke ikike nwere ọrụ dị iche iche.
Ngwaọrụ Dị Mma Mee ABM mfe
Ebe ọ bụ na ABM bụ usoro ahaziri iche, ọ dabere na data ndu dị mma. Y’oburu n’inweghi ihe obula, ezi nchekwa data i kwesiri ịdabere na ya, iru ndi mmadu nile no n’ime nkpebi nwere ike itu. Ya mere enwere ike ịgbalị ịchọta mgbasa ozi ngosi omenala na ntanetị ndị ọzọ site na adreesị IP ụlọ ọrụ.
Ndị ahịa ABM gara nke ọma amatala amụma ahụ nchịkọta nyiwe emere maka B2B ndu ndu na-enye ezi ndu data zuru oke iji mee ka ABM nwee ike. Advanced ịkọ nchịkọta ihe ngwọta nwekwara ike inye aka chọpụta ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị ịchebe dabere na njikere ha dị ịzụrụ, ịchekwa oge na ịbawanye ohere nke ịga nke ọma
Imirikiti na-etinye ọnụ na nyiwe akpaaka ahịa dị ka Marketo na Eloqua, yana ngwaọrụ CRM dị ka Salesforce. Mmekọrịta na akpaaka ahịa na CRM na-enye ụlọ ọrụ ohere ịhazi, mejuputa, tụọ ma bulie mkpọsa ABM site na iji nchịkọta ahịa ha dị.
Ebumnuche, Ahịa, Tụọ
Ugbu a ị ghọtara isi ihe, olee otu ị si amalite? Nzọụkwụ mbụ iji mejuputa mkpọsa ABM bụ ịchọpụta ihe ndekọ gị. Ikekwe ị maraworị onye ịchọrọ ịchọta. Ọ bụrụ otu a, gaa na ya. Ọ bụrụ na ịnweghị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite azụmahịa ọhụrụ, akara ngwaahịa ọhụụ ma ọ bụ na-ebugharị ọhụụ maka azụmaahịa dị, ịchọrọ ndepụta ndepụta.
Ebe ọ bụ na ABM na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ ndị ga-abụ ndị ahịa gị kachasị mma, ịkwesịrị ịma ihe ezigbo ụlọ ọrụ atụmanya gị yiri. Nke a pụtara atụmanya ndị ọ bụghị naanị na ha nwere ike ịtụgharị, kamakwa ịmepụta uru ogologo oge.
Ezigbo profaịlụ profaịlụ gị kwesịrị ịgụnye omume igwe mmadụ, yana data data igwe, yana ihe omume, dabara na ebumnuche. Kedu ụdị azụmahịa kachasị mma? Ego ole bụ ego ha na-enweta kwa afọ? Kedu ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ? Ebee ka ha dị? Na mgbakwunye, profaịlụ ndị ahịa dị mma kwesịrị ịchọ njirimara omume site na atụmanya, dị ka oge ole ha gara na saịtị gị, yana nghọta nke ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ ha na-eji na usoro ịzụta ha.
Hazie ma Na-ebute riozọ
Ozugbo ịchọputara atụmanya dị mma, ihe na-esote bụ ịhazi na ibute ndepụta ahụ ụzọ, wee mee atụmatụ azụmaahịa maka itinye aka na ike. Dịka e kwuru n'elu, ị naghị anwa ịdabere na mmadụ, kama ọ bụ ndị na-eme mkpebi n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Nke a choro uzo ahia zuru oke nke na agbasawanye iru nke izipu ozi na otutu owa. Approachzọ a nwere ike ịgụnye mgbasa ozi ngosi siri ike, ọpụpụ ahịa, mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ọzọ. Isi ihe bụ maka ịzụ ahịa na otu ndị na-ere ahịa ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nweta ebumnuche ha.
Eziokwu ahụ bụ na ABM na-eweta ahịa na irekọtara ọnụ buru ibu. Marketo na-akọ na pasent 50 nke oge ere lara n'iyi na atụmanya na-enweghị isi na ahịa ndị ahịa na-eleghara pasent 50 nke ahịa ahịa anya. Misalignment ọ bụghị naanị na-efu arụpụtaghị, kamakwa ọ tufuru ohere azụmahịa. Dabere na MarketingProfs, òtù ndị jikọtara ọnụ #sales na #marketing ọrụ na-enweta 36 pasent elu ọnụego njigide ndị ahịa na 38 pasent ọnụego mmeri ahịa dị elu.
Gbado anya na Uru Ndụ
Na ABM, imechi nkwekọrịta abụghị njedebe nke mmekọrịta, mana mmalite ya. Ozugbo atụmanya ghọrọ ndị ahịa, ọ dị mkpa ka afọ ju ha. Nke a chọrọ data. Ndi otu B2B kwesiri ima ihe n’eme mgbe ndi ahia zutara, ihe ha n’eji na ihe adighi eji ha, na ihe n’eme ka ndi ahia ahia nke oma. Onye ahịa abaghị uru ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ijide azụmahịa ha. Kedu ka ha si jiri ngwaahịa a? Hà nọ n'ihe ize ndụ nke ịla? Ha bụ ezigbo nwa akwukwo maka ịre ahịa ma ọ bụ ire ere?
Na ABM na-eduga, Ọ dị mma karịa oke
The ọnụ ọgụgụ nke na-eduga na ohere ezughị ezu iji tụọ ABM. Usoro a anaghị arụ ọrụ na nkọwapụta ọdịnala nke ndu, ma jiri ụkpụrụ dị elu karịa oke. N'oge gara aga, nnukwu ụlọ ọrụ na-azụ ahịa nke ọma na-eji ABM eme ihe bụ ndị nwere ike itinye oge na ego dị mkpa na usoro mmetụ dị elu. Taa, teknụzụ na-enyere aka rụọ ọrụ na ịba ụba ABM, nke na-eweta ego akwụ ụgwọ ma na-eme ka ABM nwee ike ịnweta ụlọ ọrụ nha niile. Nnyocha na-egosi n'ụzọ doro anya na ahịa B2B na-aga n'ihu ABM. Ọ bụ naanị ihe ngwa ngwa.
Tags: abmahia dabere na ahịaahịa akaụntụmgbasa oziịde blọgụozi ederedeeloquaemail Marketinginboundmgbasa ozi dabere na ipndu gennduahịaọpụpụugwo ndu ahia ahiaihe omume ibekeonwena-atụ anya ekwentịretargetingndị ahịaelekọta mmadụ mediaihe omume nke atọelu oluluNhazi webwebinarsKedu ihe bụ abmKedu ihe bụ ahịa na-adabere na akaụntụ
Doug bụ CEO nke Ebute ụzọ. Doug nwere afọ iri abụọ nke ahụmahụ na-ewu ụdị klas ụwa na ụlọ ọrụ teknụzụ. Emeela ya ma duru ahịa B20C na B2B, na-achọ ọgbọ na mmemme ụlọ maka ngwa ahịa na ọrụ teknụzụ.